Author: Dead Soul | Filed Under: Windows |0comments
Windows7နှင့် Vistaသည် ပုံမှန်အားဖြင့် Remote Desktopအား ပိတ်ထားပါသည်။ သို့သော ၄င်းအား လွယ်ကူစွာဖြင့် ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ Vistaအား တခြားကွန်ပျူတာမှ လှမ်းကြည့်ချင်ပါက Remote Desktopအား ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ Remote Desktopသည် Business, Profesional, Ultimate Versionsတွင်သာ ပါပါသည်။ Home Editionတွင် ယင်းမပါပါ။
System Configuration Page ကို သွားရပါမယ်။ ခေါ်တဲ့နည်း (3)နည်းရှိပါတယ်။ (၁) - Start menu ခေါ် ၊ Menuမှ Computer ပေါ်တွင် Right-clickနှိပ်ပြီး ပေါ်လာသော Menuမှ Properties ကိုနှိပ်ပါ။ (2) Start Menuကိုခေါ်ပါ။ Search boxတွင် Systemကို ရိုက်ထည့်၍ Enterခေါက်ပါ။ (၃) Control Panel > Systemကိုလည်း နှိပ်နိုင်ပါသည်။
System Properties Windowsရဲ ဘယ်ဘက်အပိုင်းတွင် Remote Settingကို တွေ့ရပါမည်။ နှိပ်လိုက်ပါ။
System Properties Dialog Boxမှ Remote Tabအောက်တွင် "Allow Remote Assistance connection to this computer"ကိုအမှန်ခြစ်ပြပါ။ Remote Desktop အောက်တွင် တတိယရွေးချယ်မှုကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Allpy > Ok
How to Create Password Reset Disk in Vista Using USB
လူတိုင်း လူတိုင်း မည့်သည့်အရာ၊ ကိစ္စ မဆို တခါတရံ မေ့တတ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူများသည် ပို၍ မေ့လွယ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော အချက်အလက်များစွာအား ဦးနှောက်ထဲသို့ ထည့်သွင်းရပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခုတင်ပြမည့် အကြောင်း အရာကတော့ USB Flash Driveကို အသုံးပြ၍ Windows Vista Admin Passwordအား (Reset) ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အနေနဲ့ပေါ့။ တခါတရံ မိမိရဲ့ Passwordကို တခြားတယောက်ယောက်အား ပေးသိထားပြီး Passwordအသစ်ကို ခဏခဏ ပြောင်းလိုက်ရင် မေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် User Passwordကို ထည့်လိုက်တာနဲ့ Password Resetလုပ်ဖို့ သင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ Windows Vista Userနဲ့ Password တစ်ခုခုအားမှားယွင်းစွာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါက Error Message ထွက်လာမည်မှာ သေချာပါတယ်။
Reset Passwordလုပ်ဖို့ USB တစ်ချောင်းတော့ လိုလိမ့်မယ်။ Floppy Diskကတော့ အခုခေတ်မှာ အသုံးနည်းသွားပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် USBနဲ့ Reset Diskလုပ်ပါမယ်။ အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ပါ။
ဦးစွာ USB Flash Driveအား ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
Start Menu > Control Panel > User Account and Family Safety နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် User Accounts ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် ဘယ်ဘက် Paneတွင် Createapassword reset diskကို Task ရဲ့အောက်မှာနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် Password Reset Wizard's Welcome Screen Dialog Boxထွက်လာပါက Nextနှိပ်ပါ။
နောက်တစ်မျက်နှာတွင် I want to create password key disk in the following driveတွင် USB Driveကို တွေ့ပါမည်။ မဟုတ်ပါက ထပ်ရွေးပြီး Nextကိုနှိပ်ပါ။
လက်ရှိ User Password Boxထဲတွင် လက်ရှိ Userရဲ့ Passwordကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် Nextကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ မိမိUserတွင် Passwordမရှိသေးပါက Password boxကို အလွတ်ထားလိုက်ပါ။ အရင်ဦးဆုံးထည့်ထားပါက ကောင်းပါလိမ့်မည်။
Prograss Barက ၁၀၀%ပြည့်သွားပါက Finishကိုနှိပ်ပါ။ USBကို မလိုအပ်သေးပါက ဖြုတ်နိုင်ပြီး လိုအပ်လျင် ထို USBအား နံမည်တပ်မည်/ သို့မဟုတ် အနာဂတ်မှာ Password Rest အသုံးပြုဖို့ အမှတ်အသားပြုနိုင်ပါသည်။
Password Reset Disk လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။
Windows Vistaတွင် Password မေ့သွားပြီး Reset လုပ်လိုပါက.
USBကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
Longo နေရာရောက်နေပါက Reset Passwordကိုနှိပ်ပါ။
Password Reset Wizardတွင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် The password key disk is in the following drive list စာသားအောက်တွင် မိမိ Reset Diskကို ရွေးပြီး Nextကိုနှိပ်ပါ။
နောက် Screenတစ်ခုတွင် Password အသစ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ Confirmဖြစ်ဖို့ နောက်တစ်ခေါက် ရိုက်ထည့်ပါ။ Nextကို ထပ်နှိပ်ပါ။
နောက် Screenတစ်ခုတွင် ခုဏကရိုက်ထည့်တဲ့ Passwordကို ထပ်ရိုက်ပါ။ Confirm fieldတွင် ထပ်ရိုက်ပါ။ Password hintကိုထည့် Passwordမှတ်မိလွယ်အောင် ရိုက်ထည့်နိုင်ပါသည်။
ထပ်ပြီး Nextကို ထပ်နှိပ်ပါ။ Wizardကို Finishနှိပ်၍ ပိတ်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံး Vista Userအား Passwordအသစ်ဖြင့် ရိုက်သွင်း ၀င်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ USBနဲ့ Password Resetလုပ်တာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မည်သည့် Vista Edition မဆို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မိမိ Vistaကို Password Reset Disk လုပ်ထားတဲ့ USBကို တခြားကွန်ပျူတာအား အသုံးပြု၍ မရပါ။ ယင်း USB Reset diskအား လုံးခြုံသည့်နေရာတွင် ထားရပါမည်။
Author: Dead Soul | Filed Under: အထွေထွေ |0comments
ကျွန်တော် ခရီးထွက်ရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Postတွေ တင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရီးက ကြာမယ်ထင်ပါတယ်။ အမေ၊ အကို၊ တူမနဲ့ ချစ်ချစ်ကိုလည်း ခွဲရတော့မယ်လေ။ ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက် ခဏတာ လမ်းခွဲရတာပေါ့။ ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော် (၁၀)တန်းတုံးက The brookဆိုတဲ့ကဗျာကို မှတ်မိသေးတယ်။ Alfred Lord Tennyson ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေ။ ဒီကဗျာကို အမှတ်တရ အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ပုဒ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ အရင်းနီးဆုံးလူတစ်ယောက်အတွက်ပေါ့။
Related Posts Widget with Photo Thumbnails
Author: Dead Soul | Filed Under: Blogging |0comments
တူညီတဲ့ Categoriesများမှာ တူညီတဲ့ အကြောင်းအရာများနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Related Posts Widgetက ဖော်ပြပါတယ်။ Postsများတင်တိုင်း သက်ဆိုင်ရာ တူညီတဲ့ Postများအား ဖော်ပြခြင်းအားခြင့် စာဖတ်သူအား စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တူညီတဲ့ Postတွေကို လွယ်ကူစွာဖြင့် ရှာဖွေစေနိုင်ပါတယ်။ ယခင် Postတွေမှာလည်း ပုံစံတူ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခု Postက Thumbnail ပုံတွေ ပါတဲ့ Related Posts Widgetဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Widgetက Postတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကို ပြပါတယ်။ Postထဲမှာရှိတဲ့ ပုံကတော့ အပေါ်မှာ ပေါ်ပါတယ်။ ပုံစံကိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Blogထဲမှာ တင်ပြထားပါတယ်။ သိပ်လှပပြီး စာဖတ်သူများ လွယ်ကူစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သဘောကျတယ်ဆိုရင် ကိုင်း.. ထည့်ကြရအောင်။
email လိပ်စာ၊ Blog URL၊ Platformက Bloggerရွေး၊ Widthက5storiesယူ၊
နောက်တစ်ခုက My blog has light text onadark background အကယ်၍ သင့်Blog Backgroundက အမည်းရောင်ဖြစ်ပြီး စာလုံးက တောက်ပတဲ့အရောင်ဖြစ်နေပါက အမှန်ခြစ်ပြပါ။ တခြားအရောင်ဖြစ်နေပါက အမှန်ခြစ် မပြပါနဲ့။ စာလုံး မထင်းရှားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။
Get Widget buttonကိုနှိပ်ပါ။
စာမျက်နှာပါ အဆင့်ဆင့်အတိုင်း ဆက်သွားပါ။
Windowနောက်တစ်ခု ထွက်လာပါမည်။ Blog ကိုရွေးပြီး Add Widget buttonကိုနှိပ်ပါ။
အရေးကြီးသည်မှာ ယင်းထည့်သွင်းလိုက်သော Widgetအား Post Areaရဲ့အောက်မှာ သွားထားရပါမည်။ ပြီးက Save ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။
View Blogကို သွားပါ။
Run Boxထဲမှာ gpedit.msc ဖွင့်လို့ မရပါက
ယ်ုမုသှေ်ယာ့ဝးသာ လ်ုယုကွန်ပျူတာ run box ဖိုင်ဏှ် gpedit.msc ဍောဟ်လင်ဏေ၀်လိုင်အေး.. မ်ုဝးမာ ပ်ုသှေ်လယ့်ဏှ် စ်ာဂုဏ်စ်ာတာဝး ဆေ၀်လှ်.
ကျွန်တော်ဘာ လုပ်ရမှာလဲ။ Run Boxထဲမှာ gpedit.mscရိုက်ထည့်လို့ မရလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါဦး။
ဒါကို မဖြေကြားခင် ကျွန်တော် မေးခွန်တစ်ခု ထုတ်ချင်ပါတယ်။
သင်၏ Windows XPက Home Editionဖြစ်နေပါသလား။ Home Editionဆိုရင် gpedit.msc (Group Policy Editor) မပါလာပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော XP Homeသည် Standalone versionဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Windows Vista ဖြစ်နေပါက Vista Home Premiumဆိုရင် gpedit.mscမပါလာပါ။ Vista Business, Ultimate and Enterpriseဆိုရင် ပါလာပါတယ်။ တိကျတဲ့ Informationကို သိချင်ရင်တော့ ဒီ Forumမှာ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ တခြား Version အထူးသဖြင့် Windows XP Proဆိုရင်တော့ ပါလာပါတယ်။ ပါလာရဲ့သားနဲ့ ခေါ်လို့ မရသေးဘူးဆိုရင် Virus ကြောင့် အများဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
Registry Editorထဲမှာ သွားပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Registry Editorထဲတွင် အပြင်အဆင် မှားသွားပါက မိမိ၏ Windows problemsများစွာ ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့် မတင်ပြချင်ပါ။ ထို့ကြောင့် Consoleထဲတွင် သွင်းထည့်နိုင်ပါသည်။
Start menu > Run > "mmc"ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ Consoleဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Console 1 Windowမှ File menu> Add/Remove snap in...ကိုနှိပ်ပါ။
Add/Remove snap in.. dialog boxမှ Add buttonကိုနှိပ်ပါ။ ပုံပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Add Standalone snap-in dialog boxမှ Available Standalone snap-ins အောက်ကိုသွားပြီး Group Policy Object Editorကို selectလုပ်ကာ Add buttonနှိပ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် Finish buttonကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Okဆက်နှိပ်ပါ။ Saveလုပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် gpedit.msc ပေါ်လာပါပြီ။
အကယ်၍ မရသေးပါက အကြောင်းကြားပါရန်။
အင်္ဂလိပ် - ဗမာ - ကရင် အဘိဓါန်
Author: Dead Soul | Filed Under: Download |2comments
တိုင်းရင်းသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ သွေးစည်းညီညွတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား Bloggerများစွာ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အားရစရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ပညာရေးနဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေပါသောကြောင့် I will apply my knowledge to my people whatever I have right now and whatever I will get in the futre. ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတင်ပြမယ့် Postက ဆရာ Ogreမှ တင်ပြပြီးသား Postဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးသားထားတဲ့
Eglish-ဗမာ-ကရင် Dictionary လေးပါ ။
Comment ထဲမှာတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏ .. :-P
ကရင် font အတွက်တော့
knu ဆိုတဲ့ font ကို font folder ထဲမှာ သွားထည့်ဖို့တော့လိုပါတယ် ..
Framework (2.0) လေးလည်းလိုပါတယ်ဗျာ .. window ထဲမှာ Framework မရှိရင်တော့ ဒါလေးကို download ချပြီး install
အဆင်ပြေပါစေ ... :-)
မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓါန်
Author: Dead Soul | Filed Under: Download |0comments
မြန်မာနိုင်ငံသားများ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း မိမိကွန်ပျူတာတွင် အဘိဓါန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ အဘိဓါန်လေးကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်သင့်ပါတယ်။ ဖောင့်အနေနဲ့လည်း Zawgyi-one, Myanmar3, Ayar Burmese စတဲ့ (၃)မျိုးပါတာကြောင့် ကြိုက်တာသုံးနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ program လေးကို ကိုစိုးမင်းမှ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထွေထွေထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ HTML linkနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ။ သာမန်အားဖြင့် Blogspotမှပေးသော Linkသည် ရိုးရိုး Linkသာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိချိပ်လိုက်သော Linkသည် မိမိ၏ Webpageမှ ထွက်သွားပြီး ထိုLink၏ Webpageသို့သွားပါမည်။ ဒီလိုသာဆိုရင် မိမိ၏ ဧည့်သည်သည် မိမိBlogမှ ထွက်သွားပြီး အခြားနေရာသို့ ရောက်သွားမည်မှာ သေချာပါသည်။ များသောအားဖြင့် မိမိBlogမှ ထွက်မသွားလိုသော ဧည့်သည်သည် ထိုLinkအား Right-clickနှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Menuမှ New Tab (သို့) New Windowကို ခေါ်ရပါမည်။ ဒါကြောင့် ဤ Postကို တင်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
<a href="http://www.yahoo.com">Go to Yahoo</a>
မိမိ၏ Blogမှ မထွက်စေပဲ ယင်း Link၏ New Window pageကို သွားလိုပါက..
Transperant Calendar ထည့်လိုပါက
ကျွန်တော့် Blogထဲကလို Transperant Calendarထည့်လိုပါက ထည့်နိုင်ပါပြီ။ ဤ Calendarကို ကျွန်တော် အရမ်းနှစ်သက်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရိုးရှင်းပြီး Updatedဖြစ်ပါသည်။ HTMLဖြင့် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏ Templateပေါ် မူတည်ပြီး Transperantဖြစ်ပါမည်။ များသောအားဖြင့် တပည့်များ ကြိုက်ကြပါသည်။ အခြားသော Calendarများစွာ ရှိပါသော်လည်း ပြုလုပ်သူ၏ Labelပါသောကြောင့် မကြိုက်ပါ။ သင်ထည့်လိုပါက အောက်ပါအဆင့်တိုင်း ယူပါ။
၁။ ဤ Calendar Linkကိုနှိပ်ပါ။ ယင်း fileကို Google Docsထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။
၂။ Codeကို ကူးယူပါ။
၃။ Blogger Sign In > Layout > Page Elements > Addagedgetကို နှိပ်ပါ။
၅။ ကူးယူထားသော Codeကို Pasteလုပ်လိုက်ပါ။
၆။ Save လုပ်ပါ။ မိမိထားလိုသည့် နေရာတွင် ထားပြီး Saveထပ်လုပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် ရိုးရှင်းပြီး သိပ်လှပတဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို ရပါမည်။
Twitter Attack To Silence Georgian Blogger
တင်ပြသူ - Posted in Social Network by AURUM3 NewTech on the August 9th, 2009
DDoSနည်းဖြင့် Twitterကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့သူကတော့ Russiaမှဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလူသည် Republic of Georgiaနိုင်ငံမှ အသက်34နှစ် စီးပွားရေးပါရဂူ တစ်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်။ Abkhazia Georgian bloggerသည် ၄င်း၏ Blogမှ Russiaနှင့် Georgiaနှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်စစ်ပွဲအကျဉ်း ထိုဖြစ်ရပ်များကို ဦးဆောင်ချပြထားသည်။
ယင်း Russia နိုင်ငံမှ သိရသည့် တိုက်ခိုက်သူများသည် Spam Email Messagesများစွာကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး Twitter, Facebookကိုလည်း ဒရစပ် တိုက်ခိုက်ကာ အခြားသော ၀န်ဆောင်မှုများကိုလည်း Junk messagesများဖြင့် ၀င်ရောက် နှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။